67 HA Atsimo : Fanafihan-jiolahy indimy nisesy – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → janvier → 2 → 67 HA Atsimo : Fanafihan-jiolahy indimy nisesy
« 67ha atsimo mihazo an’ Andohatapenaka nisehoan’ny asan-jiolahy » Sary: Anastase
Raha somary nangigina ny asan- jiolahy manodidina iny fariitry 67 ha atsimo iny ka mihazo an’ Andohatapenaka iny, nandritra ny fotoana vitsivitsy, vokatrin’ny paikady napetraky ny mpitandro filaminana. Tsapa tato ho ato,fa miverina mahazo vahana indray ny asa ratsin’ireo olon-dratsy.
Ny alin’ny 30 desambra hifoha 31 desambra lasa teo, dia nitrangana fanafihan-jiolahy indimy misesy iny faritra 67ha atsimo mihazo an’Andohatapenaka iny,ka nahitana vaky trano tamin’izay. Noho ny fiaraha-miasan’ny fokonolona sy mpitandro filaminana, dia nalaky tonga hatrany ny « EMO SECURITE », ka nahatsiaro ho voaelingelinga hatrany amin’ny asa ratsy nataony ireo jiolahy. Na dia izany aza,nisy ihany ireo entana very,toy ny entam-barotra vitsivitsy,ny finday,ny volamena,sns ary ankasoparany amin’ny tranombarotra iray izay tsy nahazoan’ireo jiolahy na inona na inona
Tamin’ny fanadihadihana nataonay teny an-toerana iny alina iny ihany, dia fantatra araka ny voalazan’ny fokolonona, fa maromaro ihany ireo jiolahy ary nanao fanamiana miaramila, saingy tsy manao kiraro sy mitondra basy ary fitaovana maro samihafa. Voalazan’ny fokonolona ihany koa, fa nisy tompon-trano iray no naratra vokatry ny fanoherana nataony ireo jiolahy,ka voaendaka tamin’izay ny peratra volamena sy ny finday. Soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy vokatry ny « intervention rapide » nataon’ny « EMO SECURITE » hatrany,ka mendrika hoderaina. Fanentanana sy hafatra hatrany no napetrak’ireo mpitandro filaminana ho an’ireo vahoaka, ka tsy tokony hisalasala sy hiantso haingana ny laharan-telefaona 017, raha misy ny trangan-javatra mampiahiahy, mba hahafahan’ireo mpitandro filaminana tonga haingana sy hahomby ny fanenjehana ireo olon-dratsy.